Iindaba - Zeziphi iinkqubo ezithe iimveliso zealuminium zadlula kwizinto ezingasetyenziswanga ukuya kulungiso kunye nokubumba?
Ukuphosa ngokuchanekileyo kweAluminiyam kunokwenziwa kwiimveliso zealuminium. Nangona izikali kunye neemilo zahlukile, ubungakanani obuchanekileyo, inkangeleko entle kunye nokusebenza okuzinzileyo kunokunceda abantu nabantu, kwaye bakhe umbala ohlukileyo wobomi. Kubomi bethu, kuhlala kukho inkampani yeemveliso zealuminium, ezinje ngeepleyiti zealuminium, iityhubhu zealuminium, isakhelo sealuminium, iqokobhe lealuminium, njl njl, egubungela yonke imiba yobomi bethu. Zonke zenziwe ngealuminium ngokuqhubekeka ngokuchanekileyo, izinto ezikhethiweyo ezingafaniyo ziyafana, kodwa indawo yokugqibela yesicelo kunye nendima iya kwahluka, yenza iintlobo zeemveliso zealuminium, kwaye oku kwenziwa ngeemveliso zealuminium ezimiselwe kukuhamba kokuqhubekeka.
Ukuhamba kokuqhutywa kweemveliso zealuminium kumisela ukuba yeyiphi indima ekufuneka eyidlalile okanye yeyiphi indima ekufuneka eyidlalile emva kokubumba. Ke ngoko, ukwenziwa kweemveliso zealuminium kubaluleke kakhulu. Makhe sijonge kwiimveliso zealuminium kwizinto ezisetyenzisiweyo ukuya ekubumbeni. Inkqubo enamava.
Uhlobo ngalunye lwemveliso yealuminiyam ineemfuno ezithile zobungakanani, kwaye kufuneka ichanekile kwaye ibe nobunkunkqele ukuze isetyenziswe ngokulula. Oku kufuna ukuba abenzi bemveliso ye-aluminium babenobuchwephesha bokubumba ubuchwephesha bokufa kunye nokuvulwa kokuvulwa kwesakhono sokufezekisa ukuveliswa kwemveliso kunye nokuveliswa okucocekileyo. I-die-casting yokubumba kukufudumeza i-aluminium kubushushu obuthile, kwaye emva kokuba inyibilikisi ye-aluminium inyibilike, itofwe ngaphakathi ekubumbeni, kwaye emva koko inokukhutshwa ngaphandle kwesikhunta emva kokupholisa kunye nokwenza iimveliso zealuminium ezinemilo entsonkothileyo kunye nemilinganiselo echanekileyo.
Emva kokuba iimveliso zealuminium zenziwe, umphezulu wesinyithi uya kuba noburhabaxa, ukungalingani, ukukrwela, i-burrs, amasuntswana, njl. Ezi mveliso zealuminium azintle okanye zigqibelele, ke iimveliso zealuminium kufuneka zipolishwe emva kokwenza. Umphezulu ulungisiwe. Iindlela eziqhelekileyo wokucoca ziquka wokucoca ngoomatshini, wokucoca imichiza kunye wokucoca electrolytic. Iimveliso zealuminiyam ezipholileyo azinaziphene, umphezulu ogudileyo, ogudileyo, nococekileyo, njengesipili.
Iimveliso zeAluminiyam zahlukile kwiiceramics, iinkuni, iiplastiki kunye nezinye izinto, hayi kuphela ngokobunzima obuphezulu besinyithi uqobo, kodwa nakwimbonakalo yentsimbi eyodwa yeemveliso zealuminium ngokwazo. Iimveliso zeAluminiyam zinokuthandwa ebomini, kwaye ubume bentsimbi bubalulekile. Ubuhle bomoya ozolileyo obuziswe ngabantu, kwaye inkqubo yokuzoba ihlala isetyenziselwa ukuphucula ubuhle bezinyithi zeemveliso zealuminium kwinkqubo yokulungisa nokwenza iimveliso zealuminium.
Umzobo wocingo kunye nokucoca zombini unyango olucokisekileyo kumphezulu weemveliso zealuminium ukuphucula i-aesthetics, kodwa umahluko phakathi komzobo wocingo kunye nokupholisha kukuba yenza imigca emitsha kumphezulu wesinyithi, ukutshintsha ukusilela kobuso bentsusa okanye ukusebenzisa imigca eyahlukeneyo . Imigca ethe rhoqo neyayifanayo yokwandisa ubume bentsimbi kunye nobuhle beemveliso zealuminiyam.
Eyona nto ixhalabisayo malunga neemveliso zealuminium kubomi bemihla ngemihla yi-oxidation kunye nokubola. Nje ukuba zonakalise, azizukuchaphazela kuphela i-aesthetics ngenxa yomhlwa, kodwa kunye neendawo ezinomhlwa ziya kuba buthathaka kwaye zichaphazele uzinzo ngokubanzi. Ukwenza i-Anodizing kubalulekile apha. Inkqubo. I-Anodizing yinkqubo yonyango yomphezulu engaphuculiyo kuphela ukubonakala kweemveliso zealuminium, kodwa kunye nokuxhathisa umhlwa kunye nokunxiba ukumelana. Ngokubeka izinto zealuminium kwi-electrolyte ehambelanayo kunye neemeko ezithile zenkqubo, umbane usetyenziswa kumphezulu weemveliso zealuminium Ifilimu ye-oxide iyenziwa. Abavelisi bemveliso yeAluminiyam banokwenza umphezulu weemveliso zealuminium kwimibala eyahlukeneyo ngexesha lenkqubo ye-anodizing, ukuze iimveliso zealuminium zibe nemikhombandlela engaphezulu yokubumba, kwaye kwangaxeshanye, umaleko we-oxide uxinene kwaye akukho lula ukuwa, uqinisekisa Umgangatho weemveliso zealuminium uzinzile kwaye uzinzile.
Iimveliso zealuminium esidibana nazo kubomi bethu bemihla ngemihla azomeleli kuphela kwaye zihlala zomelele, kodwa zilungile kwaye zintle. Ukuphumeza isiphumo esinjalo, ayinakwahlulwa yinkqubo yokulungisa kunye nokubumba elawulwa ngumenzi. Ewe, ezi nkqubo zichazwe apha ngasentla ayizizo zonke, abavelisi kufuneka bacinge Ukuvelisa zonke iintlobo zeemveliso zealuminium, ukhetho lwetekhnoloji kufuneka nalo luqwalaselwe. Nangona kunjalo, ihlala ifana. Ukuphosa ngononophelo kunye nokulandela umgangatho yimeko ekufuneka yenziwe ngabavelisi kwimveliso yeemveliso zealuminium.